Okwu mmalite nke ihe eze eze YUCERA
site ha na 21-07-30
N'ịbụ nke dị na mpaghara akụ na ụba pụrụ iche nke Shenzhen, Shenzhen Yurucheng/YUCERA Dental Material Co., LTD bụ ụlọ ọrụ zuru oke na -emepe emepe, n'ichepụta na ire ahịa Dental Zirconia Ceramic Block. Dị ka ọkachamara Dental Zirconia Block Manufacturers, Yurucheng Cherish ụkpụrụ ...
Njem ọhụrụ nke ijikọ ụlọ ọrụ, ikwe aka na idebe isi ọhụrụ
Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd., nke hiwere ọkwa ọhụrụ oge ọ bụla, ewebatala oge akụkọ ihe mere eme dị mkpa. Na Eprel 12, 2021, Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. na Shenzhen Dental Craftsman's Home Technology Co., Ltd.
Asọmpi nka nka nke Yucera nke Mbụ
Asọmpi nka mbụ nke Yucera maka ihe ngọngọ zirconia bidoro na Julaị 12, nke ọfịs onye isi njikwa na -akwado. Ekewara ihe omume ahụ niile ụzọ atọ: ndebanye aha na nyocha, asọmpi saịtị, na foto otu na-enye onyinye. Ihe karịrị 30 ngalaba ...
Guzosie ike n'ihe mgbaru ọsọ gị, ma nọgide na -agba ume.
Emere nzukọ nchịkọta ọkara afọ nke Yu Rucheng na 2021 na nsọpụrụ. N'okpuru nduzi nke onye isi njikwa Mr. Liu Jianjun, ndị isi nke ngalaba ahịa wee bịa na nrọ ha, na -achịkọta enweghị ọrụ na ọkara mbụ nke ...
Kedu ihe bụ Zirconia Block?
site na nchịkwa na 21-07-17
Dị ka anyị niile maara na enwere ụdị ihe atọ eji eme mweghachi ezé: ihe mgbochi zirconia na ihe igwe. Zirconium oxide na -eme dị ka ụdị monoclinic, tetragonal na cubic crystal. Enwere ike imepụta akụkụ ndị mebiri emebi n'ụdị kristal na/ma ọ bụ tetragonal. Ka ị ghara ...
Yucera akwụsịghị nzọ ụkwụ ha ịga n'ihu.
site ha na 21-06-22
Dị ka onye nrụpụta ọkachamara maka CAD CAM eze zirconia seramiiki blocks, Yucera nwere ebumnuche nke “agba mbọ imepụta ihe dị mma na ahụike ezé zirconia na iwulite ụdị ama ama nke ihe zirconia eze”; Yucera akwụsịghị nzọ ụkwụ ha ịga n'ihu. Con ...
Ihe ngosi mba ụwa nke Dental South China 2021 bịara na njedebe na nkọwa zuru oke.
Ihe ngosi mba ụwa nke Dental South China 2021 bịara na njedebe na nkọwa zuru oke. Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. na-aga n'ihu n'ihu! Dental ụbọchị anọ nke mere ...
Ihe mgbochi Zirconia eze
Ọ bụghị ntụ ntụ zirconia niile dị na azụmahịa bụ otu. Ọdịiche dị n'etiti ngwaahịa na nha ọka na ihe mgbakwunye na-ejikwa ike ihe mgbochi zirconia, nkwụsi ike ogologo oge, na translucency. 1. Ọzọkwa, mgbanwe usoro nke eze zir ...